नेपाल आज | ओली क्याम्पभित्रै दुई सङ्गिन आरोपः सत्तरी करोडको बात र चेलीबेटीमाथि घात !
ओली क्याम्पभित्रै दुई सङ्गिन आरोपः सत्तरी करोडको बात र चेलीबेटीमाथि घात !
प्रधानमन्त्री एवम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका दुई प्रिय पात्र हुन– पुर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र केन्द्रिय सदस्य महेश बस्नेत ।
बास्कोटा २५ बर्ष अघि पत्रकार महासंघको काठमाण्डू जिल्ला समितिमा सक्रिय थिए । सोही बखत बस्नेत भक्तपुरको गुन्डु गाबिसको अध्यक्ष। बास्कोटा र बस्नेतको केन्द्रीय राजनीतिमा लिनुदिनु थिएन ।
गाविसको कार्यकाल सकिएपछि विरक्तिएर बसेका बस्नेत बैदेशिक रोजगारमा जाने तयारिमा थिए । तर, अन्तिम समयमा उनी उड्न पाएनन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै वाइसिएल गठन भयो । वासीएलको काउन्टरमा एमालेले यूथ फोर्स बनायो । काठमाण्डू प्रहरीको मिलोमतोमा बस्नेतले वाइसिएलमाथि जाइलागे ।
सर्वेन्द्र खनाल काठमाण्डू प्रहरी प्रमुख थिए । खनालसँग मिलेरै वाइसिएल कुटिएको बस्नेतले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो पटक सांसद अपहरण काण्डका रूपमा परिचित घटनामा समेत बस्नेत र खनाल सँगै थिए ।
वाइसिएलमाथि जाइलागेपछी बस्नेत एकाएक चर्चित भए । पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय चुनावमा पराजित भएपनि ओलीले उनलाई मन्त्री बनाइदिए । त्यसयता बस्नेतको पार्टीभित्र पकड बढिरहेको छ । युवापंक्तिमा एउटा पंक्ति यस्तो तयार भएको छ, जो आजलाई ओली भोलीलाई बस्नेत देख्छ । अरींगाल र साईबर सेना प्रवृत्तिका मुखिया हुन बस्नेत ।
गोकुल बास्कोटा तीक्ष्ण स्वभावका हुन । उनको प्रस्तुती तिखो र तार्किक छ। यो स्वभाबले यिनी केहीको नजरमा हिरो त कतिको नजरमा किरो बने । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी काभ्रेमा अत्यधिक मतसहित बिजय भएपछि चिनिए ।
संचार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता भएपछि यिनको चर्चा अत्याधिक भयो । ओलीको नजरमा अरु सब एकातिर बास्कोटा अर्कोतिर राखे हुने गरी ओझिला दरिए ।
देशभर प्रभाव देखिएपनि ओलीका दुई मानसपुत्र बस्नेत र बास्कोटाको आन्तरिक कलह निषेधको तहमा पुगेको छ । बास्कोटाले सत्तरी करोडको बार्गेनिङ गरेको प्रसंगलाई बस्नेतले जोडतोडले उठाउने गरेका छन । बास्कोटा भ्रष्टचारी भएकाले आफूसँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उता बस्नेतले पार्टीका कमरेडसँग ब्यभिचार गरेको र उपयुक्त समयमा सामूहिक पर्दाफास गर्ने बास्कोटाको आरोप छ ।
बास्कोटाले बस्नेतको ब्यभिचारबारे ओलीपत्नी राधिकालाई कुरा लगाएको चर्चा एमाले नेत्री बृत्तमा छ । छिमेकी जिल्लाका बस्नेत र बास्कोटा कस्को प्रभाब बढी भन्ने इखका कारण दुबैको सिंहदरबार प्रवेश यसपटक पनि रोकिएको छ ।
गोकुल बास्कोटा महेश बस्नेत सर्वेन्द्र खनाल सत्तरी करोड